Ungangitshela ukuthi i-backlink isebenza kanjani ukuthuthukisa ithrafikhi yami yewebhu?
Namuhla, abaningi be-webmasters nabanamabhizinisi abasebenzisa i-intanethi bavame ukugxila kakhulu ku-Usesho lwe-Engine Optimization (isibonelo, amagama angukhiye, isakhiwo sewebhu, njll.). Futhi kaningi kakhulu abakhokhisi ngokwanele ukuthi izimpendulo zisebenza kanjani ngokusebenza komsebenzi wabo jikelele. Ngokwenza kanjalo, bavele baqaphele ukubaluleka kwe-backlink - njengoba iningi labathengi bemboni bakholelwa ukuthi ama-backlink ekhwalithi ngokuvamile athatha cishe u-80% wezindleko zewebonke yenani kusuka kumbono we-algorithm enkulu yokusesha injini nge-Google. Ngakho-ke, ngokuchaza ukuthi i-backlink isebenza kanjani kuwebhusayithi yakho, singamane sivume ukuthi ukuhlakulela kusuka eminye imithombo yewebhu ekhomba kuwebhusayithi yakho ngokuqondile kuthuthukisa ukubukeka kwe-intanethi ekusesha. Yingakho uma kuziwa ekuxhumaniseni isakhiwo, ngokuvamile kubonakala njengethuba elikhulu kakhulu ukuze lidlule.
Noma kunjalo, abanye abantu basalokhu bezishiya ekwakhiweni kwe-backlink ngenkuthalo. Uma kufanele kwenzeke kuwe futhi, nakhu okuyisisekelo esithile ukuthi ama-backlink asebenza kanjani ekuthuthukiseni ithrafikhi yakho yewebhu. Ukubeka ngesiNgisi esicacile, i-backlink iyisixhumanisi esixhumanisa amakhasi amabili ewebhu. Yiqiniso, ungaba nezixhumanisi zangaphakathi ezixhuma amakhasi ewebhu ahlukene ngaphakathi kwewebhusayithi yakho (ukuhamba kangcono, nezinhloso zokukhomba). Emva kwakho konke, kungani kufanele sonke sikhathalele okuningi mayelana ne-backlink quality? Ngoba kusukela ngombono wezinjini ezinkulu zokusesha (njenge-Google ngokwayo, kanye ne-Bing ne-Yahoo), ama-backlink abonisa ukubaluleka kwewebhusayithi nokusiza kubantu. Yingakho ukuba nephrofayli elihle le-backlink lizoba yisignali eqinile yokusekela izinjini ukuze uthole iwebhusayithi yakho "isinconywa" kuzithameli ezibanzi, kucabanga ukuthi kufanele ibe yigugu futhi isebenzise abantu. Futhi khumbula - kunezici eziningana eziyisisekelo ze-backlink ezinquma ikhwalithi yazo. Isibonelo, i-backlink evela emthonjeni ogcwele ngokugcwele embonini yakho ye-website enkulu izoba nesisindo. Ngaleyo ndlela, labo abavela kumawebhusayithi e-third party abane-PR ephezulu (isikhundla sekhasi), i-DA (igunya lesizinda), kanye ne-PA (igunya lesiphepha) kuzoba usizo nakakhulu.
Ngakho-ke, yiziphi izindlela ezingcono zokuthola ama-backlink esemgangathweni ekhomba kuwebhusayithi yakho yokuma endaweni ephezulu ohlwini lokusesha? Yiqiniso, ukuba nokuqukethwe kwekhasi lokuxhumana ngokuvamile kusho ukuthi usuvele uthole izixhumanisi ezikhomba emuva kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi. Noma kunjalo, empeleni, lokho bekungeke kwanele ukuba kufinyelele kahle ngokucubungula izinga elibukhali lokuncintisana kokusesha. Ngisho ukuthi ungcono ukwenza isenzo ngokuzenzekelayo nokwakha ama-backlink ngaphezulu wekhwalithi ngokwayo. Nansi indlela:
ukuhlola iphrofayli ye-backlink yomncintiswano wakho usebenzisa amathuluzi okucwaninga e-intanethi njenge-Majestic SEO, i-Semalt Analyzer, noma i-Open Site Explorer ukuze uphendule okungcono kakhulu kuwebhusayithi yakho.
zama ukuthumela okuthunyelwe - unganqikazi ukutshala isikhathi esithile ngokubhaliwe kokuqukethwe kwamanye amawebhusayithi we-third party ukuze uthole i-backlink kuwebhusayithi yakho ngokubuyisela.
gcina iso lakho kukho konke okushiwo yizindaba ukuze wenze ukukhulumisana kwezokuxhumana nokwabelana nokubala kwakho kwe-backlink.
usebenze emithonjeni yezokuxhumana ukuze uthuthukise igunya lakho lewebhusayithi enkulu, ubonise ubuchwepheshe bakho bezobuchwepheshe, futhi uthathe ezinye izinto zangemuva ngesikhathi esifanayo Source .